‘बाम सुनामी’ले मुलुकमै काँग्रेस सफाचट्को सँघारमा : बागलुङ -१ मा एमालेका पाठक विजयी ! – ebaglung.com
‘बाम सुनामी’ले मुलुकमै काँग्रेस सफाचट्को सँघारमा : बागलुङ -१ मा एमालेका पाठक विजयी !
२०७४ मंसिर २३, शनिबार ०१:५२	Home Slider, Top News, अन्य समाचार, प्रमुख समाचार
सूर्योदय सँगै विजय जुलुस निकाल्ने तम्तयारीमा गठबन्धनका कार्यकर्ताहरु !
कोपिला कंडेल, बागलुङ २०७४ मंसिर २३ । बागलुङ, म्याग्दी, मुस्ताङ जिल्लाहरुमात्र नभएर मुलुकको मतपरिणामको ट्रेण्ड हेर्दा ‘बाम सुनामी’ले नेपाली काँग्रेसलाई सफाचटको सँघारमा पुराएको छ । अहिले सम्मको मतपरिणामको रुझानलाई मध्यनजर गर्दा बाँकी मतपरिणाम पनि बाम गठबन्धनकै पक्षमा जाने पक्का पक्की देखिन्छ । नेपाली काँग्रेसका हाई कमानमा यस्को पूर्वाभास भैसकेको छ ।
नेपाली कांग्रेसले प्रकाशमान सिंह काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र १ बाट प्रतिनिधिसभामा विजयी भए संगै पहिलो खाता खोलेको छ । जबकि एमालेले ९ सीट जितेको छ भने ६२ स्थानमा अगाडी छ । माओवादी केन्द्रले २ सिट जितेको छ भने २५ स्थानमा अग्रता कायम गरेको छ । त्यस्तै प्रदेश सभा सदस्यहरुमा एमालेले १० सिट हात पारिसकेको छ भने ५५ मा अगाडी रहेको छ । माओवादीले ६ स्थानमा विजयी प्राप्त गरेको छ भने ३४ मा अगाडी छ, नेपाली काँग्रेसले प्रदेश सभा सदस्य पदमा ३ स्थान हात पारेको छ भने जम्मा १८ स्थानमा अग्रता कायम गरेको छ ।
यता बागलुङ जिल्लाको क्षेत्र नं १ को प्रतिनिधी सभा सदस्यमा बाम गठबन्धनका उमेदवार डा सूर्य पाठक, भारी मतान्तरले बिजयी भएका छन् । उनले नेपाली काँग्रेसका उमेदवार राज्यमन्त्री चम्पादेवी खड्कालाई १३०४१ मतान्तरले पराजीत गरेका हुन् । विजयी पाठकले ३३६५७ मत प्राप्त गरेका थिए जबकि पराजीत खड्काले २०६१६ मत प्राप्त गरेकी थिईन् ।
पछिल्लो मत परिणाम अनुसार बागलुङको अर्को प्रतिनिधी सभा सदस्यमा गठबन्धनकै देवेन्द्र पौडेलेको जीत सुनिश्चित छ । क्षेत्र नं २ को ख प्रदेशका राजमोका टेकबहादुर घर्ती तथा \_ क्षेत्र नं. १ को प्रदेश ख बाट राजमोकै कृष्ण थापा १५,६३६ मत प्राप्त गरी विजयी भएका छन । बाँकी दुई प्रदेश सभा सदस्यमा पनि गठबन्धनकै विजय पक्का देखिएको छ ।
बागलुङ सदरमुकाममा गठबन्धनका कार्यकर्ताहरु मिरमिरे उज्यालोको प्रतिक्षामा देखिन्छन् । उनिहरु सूर्योदय सँगै विजय जुलुस निकाल्ने तम्तयारीमा छन् ।
अपडेट: देवेन्द्र पौडेल विजयी !
क्षेत्र नम्बर २ मा वाम गठबन्धनबाट उम्मेदवार देवेन्द्र पौडेल २८,८२७ मत प्राप्त गरी विजयी भएका छन् । नेपाली कांग्रेसका नरबहादुर पुनले १९९०५ मत प्राप्त गरेका छन् भने क्षेत्र २ क प्रदेश सभामा नेपाली काँग्रेसका मन्जेशबम मल्ल भन्दा ५८२८ बढी मत ल्याएर माओवादी केन्द्रका चन्द्रबहादुर बुढा ‘सागर’ विजयी भएका छन् ।
यस्तै क्षेत्र नं १ को प्रदेशसभा ख मा एमाले अध्यक्ष ईन्द्रलाल सापकोटाले १७९१५ मत प्राप्त गरेर निकटतम प्रतिव्दन्दी नेपाली काँग्रेस सभापति दिपेन्द्र थापालाई ६७२६ को भारी मतान्तरले पराजीत गरेका छन् ।
पर्वत : काँग्रेसका जोशी, एमालेका गिरी भन्दा ७ सय मतले पछाडी !
लैङगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान बुर्तिबाङमा (तस्बीर)